Maalinta: Juun 9, 2017
Saldhigga Tareenka ee Yolcati
Saldhigga Tareenka ee Yolçatı Korkutan Dabka: Elazığ –Malatya waddo weyn oo ku taal Waddada Tareenka Gobolka Yolçatı Xarunta bakhaarka tareenka ayaa dab ka kacay. Sida ku cad macluumaad laga helay dab ka kacay 6 dhismaha bakhaar ku yaal saldhiga bishii Juun [More ...]
Trabzon Metropolitan Municipal LYS waxay ardeyda ku qaadi doontaa lacag la’aan: Degmadda Trabzon Metropolitan Municipal, 10-11 June iyo 17-18 Juun waxaa lagu qaban doonaa Imtixaanka Meelaynta Meelaha (June) meelaynta (LYS) ardayda iyo eheladooda iyo imtixaan. [More ...]
Jidadka Basaska Korantada ee Manisa: Dowlada hoose ee Manisa, oo qaaday talaabooyin muhiim ah si loogu hirgaliyo nidaamyada casriga ah ee gaadiidka Manisa, waxay sii wadeysaa inay ka shaqeyso mashruuca basaska korontada ee loo qorsheeyay gaadiid magaalada. [More ...]
Gaadiidka Dadweynaha waa u bilaash ardayda geleysa LYS ee Sakarya: Madaxa Waaxda Gaadiidka Madaxweynaha Fatih Pistil, oo sharxaya in gaadiidku u furnaan doono ardayda qaadata Imtixaannada Meelaynta Shahaadada Labaad, “LYS'de waxay dhididaa dhammaan ardayda walaalaha ah. [More ...]
Magaalada Bursa, codsiga mudnaanta koowaad ee gawaarida ee gawaarida haweenkeena ayaa sii socota!
Shirkadda Gawaarida Dawlada Hoose ee Bursa BURULAŞ waxay ka bilowdey garsooraha mudnaanta koowaad ee loogu talagalay rakaabka dumarka ah ee ka shaqeeya saldhigyada Bursaray. Iyagoo ka jawaabaya takoorida baabuurta, rakaabka Bursa waxay weydiisteen Duqa Magaalada Recep Altepe inuu joojiyo hirgelinta. [More ...]
Bozankaya Waxaad saxeexday Diiwaanno Lix Liis ah: Xalka korantada ee gaadiidka dadweynaha Bozankaya 2 gobolladiisa kala duwan ee Turkey lixdii sanno ee ugu danbeysay, qaadashada rikoor jabiyay lix Xaraashyada sidoo kale ka qeyb galay [More ...]
Kardemir, Hadafka Goosha
Bishii Janaayo-Maajo 2017, Kardemir A.Ş. waxay kordhisay wax soo saarkeeda birta dareeraha ah by 23,3%, soosaarkooda birta dareeraha ah by 21,9% iyo wax soo saarkooda shabaqa saafiga ah ee 38,2% marka la barbar dhigo isla muddadaas sanadkii hore. Muddadan [More ...]
Maalinta LYS ee Gaziantep, taraamyada iyo basaska waa bilaash ardayda
LYS gudaha Gaziantep, taraamyada iyo basaska waa u bilaash ardayda. Ardayda waxay awood u yeelan doonaan inay galaan qolka imtixaanka [More ...]
Golaha Wareegga waxaa lagu dhammeeyaa Akkaray
Wire Assembly wuxuu ku dhammaaday Akçaray: shirkii Wire ayaa lagu dhammeystirey Mashruuca Akçaray Tramway, oo ay dhiseyso Dowlada Hoose ee Kocaeli. Kocaeli Magaalo-madaxeedkeeda Akçaray Tram Project [More ...]
Tareenka iyo Jawaab-celinta Garoonka Diyaaradaha ee Corum TSO
Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha ee Corum ayaa lagu sheegay war qoraal ah, waqti ka waqti warbaahinta qaranka, oo ay kujirto wararka maalgashiga tareenka, warar sare ama warbixin dhameystiran oo lagu diyaariyey [More ...]
Saddex Maalmood ee Ugu Dambeesan Maalmaha Hore ee lagu qabtay Haydarpaşa Station
Maalmaha Buuggaagta ee Kadikoy, oo ay soo qaban qaabisay Dawladda Hoose ee Kadikoy ee Haydarpasa Station, waxay martisaa marti-sharaf kala duwan iyo munaasabado maalin kasta. 3 Maalmaha Buugga, oo billowday Sabtidii Juun, waxaa booqday kun qof. [More ...]
İsa Apaydın Mashruucyada TCDD ee laga baaray Konya
İsa Apaydın Fiiri TCDD jiray Project Konya, Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) Agaasimaha Guud ee İsa Apaydınoo ku yaal Konya YHT Station iyo Xarunta Kontaroolka ee Konya Kayacık [More ...]
Geedo saytuun ah oo ku yaal IZBAN Line ayaa mar kale ku jira ajandaha!
Geedaha Saytuunka ee 'Line Line' ayaa ku jira ajandaha! Geedaha saytuunka ee wadada mashruuca lagu fidinayo khadka IZBAN ilaa Bergama ayaa loo wareejinayaa goob kale. Rugta Beeraha ee Aliağa Ferudun Durmaz, oo ku saabsan mawduuca [More ...]
Xisbiga Bidixda Caddaanka ah ee Bari: Burulaş ha la yaabin, naag ha ahaato!
Xisbiga cagaaran ee Bidix wuxuu sameeyay bayaan ay ku dhaleeceynayaan hirgalinta haweenka öncelikli wagon prioritylan mudnaanta koowaad ee gobolka Bursa Bursa. Af-hayeenada wada shaqeynta F. Özen Çerençe iyo A. Serdar Esen [More ...]